Monday . 24 February . 2020
” လူထွက်တော့ မယ် အဖေရယ် အမေရယ်”
အမေရယ်သမီးလူထွက်ချင်တာ အမေ့ကိုသနားလို့ပါ။အမေမောင်လေးနှစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်တည်းလုပ်ကျွေးနေတာသမီးမကြည့်ရက်လို့ပါအမေ။သမီးရယ်အမေကိုထည့်မတွက်ပါနဲ့ သမီးလေးအဆင်ပြေဖို့ကအဓိကပါ အမေကဘာမှမဖြစ်ဘူး
အဲဒီဆန်တွေကို ဈေးဆိုင်မှပြန်ရောင်း ရတဲ့ငွေလေးတွေနှင့်သမီးတို့၏အာဟာရအတွက် ချက်ပြုတ်စားရတာပါအမေ။တစ်ချူ ိ့ဒကာတွေကပြောသေးတယ်အမေ ဒါနဆန်များပါရှင်လို့အလှူ ခံရင် နင်တို့လုပ်စားရှိလို့လား နင်တို့လင်အိမ်တွေမို့လားဆိုပြီး အပြောခံရတယ်အမေ သူတို့လောင်းတာကနည်းနည်း ပြောခံရတာတွေများလာတော့ ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့သမီးတို့နှလုံးသားတွေကကြာကြာမခံနိုင်တော့ဘူးအမေ
မိထွေတော်ဂေါတမီတို့ ယသော်ဓရာတို့ကိုအပြစ်တင်ချင်မိတယ်အမေ သူတို့ကဘုရားခွင့်မပြုခဲ့တာတောင် ဘိက္ခုနီသာသနာကိုရအောင်ဝင်ခဲ့တယ် သူတို့အဲဒီလိုဝင်ခဲ့လိုသမီးတို့သီလရှင်တွေ အခုလိုဝတ်နေရတာလို့အပြစ်မြင်မိတယ်အမေ ဒါတောင်တစ်ချူ ိ့ယောကျာၤးတွေက သီလရှင်တွေကိုကန့်တော့ရင်ဘုန်းနိမ့်တယ်ထင်လား မသိဘူးအမေ
သမီးတို့ဆိုယောကျာၤးတွေမရှိခိုးဘူး ရှိခိုးခံချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေအနှိမ်ခံရလို့ပါ။ ရဟန်းတွေ ကိုရင်တွေဆိုလှူ မယ့်လူ ရဟန်းခံမယ် ရဟန်းဒကာတွေပေါမှပေါအမေ သမီးတို့ဆရာလေးတွေအသက် ၂၀ပြည့်လို့လဲဘယ်သူမှရဟန်းဒကာလာမခံပါဘူးအမေ
အင်မတန်မှရှားပါးပါတယ်အမေ့ကိုလည်ဒီထက်ဒုက္ခ မပေးချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သမီးကို လူထွက်ခွင့်ပေးပါနော် သမီးလေးက သူပြောချင်တာတွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီး ရော့ ဒါသမီးအတွက်အမေဝယ်ပေးတာဖုန်းလေးကိုထုတ်ပေးတော့ သမီးလေးကဝမ်းသာသလိုရှိပေမဲ့ မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ အမေရယ် အမေ့မှာပိုက်ဆံမရှိဘဲ ဒီဖုန်းကိုဘာလို့ ဝယ်တာလဲအမေ သမီးနှင့်အမေဖုန်းပြောရအောင်ပေါ့ကွယ် ပြီးတော့သမီးလည်တရားတွေနား ဗဟုသုတတွေလည်ရှာလို့ရတာပေါ့ကွယ်
မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို မခိုင်းပါနဲ့ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ အခန့်မသင့်ရင်အကုန်မသာပေါ်သွားနိုင်လို့ပါ
တကယ်တော့ ယောကျ်ားတွေ KTV. မာဆတ်သွားတယ် ဆိုတာ… မှန်လား မမှန်ဘူးလား စာဖတ်ပြီးရင် COMMENT တော့ပေး